Iindaba -Iglasi yokugoba okushushu
NGUMPHATHI NOV. 24, 2020
Iglasi yokuhombisa yimveliso yeglasi ekhethekileyo esetyenziselwe ukuhombisa, uninzi lwayo lwenziwe nzulu, kubandakanya ukuhombisa, iqabaka, ukupeyinta, njl.
Ukuvuya Iglasi egobileyo egobileIqhubekekiswa kwindawo yokuthamba ngumngundo othile kunye nezixhobo, kwaye ipholile kwaye ngokufanayo ipholile ngumoya obandayo. Inkqubo ye-iglasi wobulali yenza uxinzelelo olufanayo lokucinezelwa ngaphezulu, kunye noxinzelelo lwangaphakathi lokuqina luyenziwa, oluphucula ngokufanelekileyo iglasi. Iglasi inezihlandlo ezine zokuguqa kunye nefuthe lokumelana neglasi. Xa yaphukile, Indlela otyumkileyo iyafana naleyo yeglasi wobulali. Amasuntswana acocekileyo angled ayingozi emzimbeni womntu.
Ke ngoko, ikwabizwa ngokuba luhlobo lweglasi yokhuseleko. Indlela yokutyumza iyafana naleyo ye- iglasi wobulali. Amasuntswana acocekileyo ane-angled awonzakalisi umzimba womntu, yiyo loo nto ikwabizwa ngokuba luhlobo lweglasi yokhuseleko.
Olukhetho olufanelekileyo kubayili bezakhiwo ekufuneka bahlangane neekhowudi zokwakha kunye nokuqiniswa kunye nokuqiniselwa iimfuno zokhuseleko. Ukuqinisekisa umgangatho, izinto ezisetyenzisiweyo kumgangatho wemveliso kufuneka zimiselwe ngumthengisi weglasi wase-China kunye nomthengi. Iyafumaneka kuwo onke amanqanaba ethu okulinganisa ubukhulu kunye nobukhulu, yiyo loo nto iglasi wobulali ixabiso kugqitywe ubukhulu ezahlukeneyo.
Iglasi wobulaliNgaba luhlobo lweglasi exinyiweyo. Ngeendlela zomzimba okanye zeekhemikhali, uxinzelelo olufanayo lokucinezelwa lwenziwa kumphezulu weglasi, kunye noxinzelelo lwengqumbo lwenziwa ngaphakathi. Kukubakho koxinzelelo lwesinyithi olunokuthi luququzelele ngokufanelekileyo ukusasazeka kwe-microcrack kumphezulu weglasi, ukuze iglasi wobulali unamandla amakhulu oomatshini, uzinzo olushushu lwentsebenzo kunye nokusebenza kokhuseleko.
Iglasi yeJoyshing yaziwa njengomnye wabavelisi beglasi abaqeqeshiweyo kunye nabathengisi e China ngeemveliso zayo ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezigqwesileyo. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya iglasi wobulali, iglasi elaminethiweyo, iglasi igqunyiwe, iglasi enqabileyo, iglasi yelanga, njl. Nceda uqiniseke ukuba uthenga iglasi ekumgangatho ophezulu ngexabiso elifanelekileyo, unxibelelane nathi malunga nekoteyishini yakutshanje kunye neenkcukacha zemveliso.